थुलियमको रासायनिक र भौतिक गुणहरू बारे थप जान्नुहोस्
थुलियम दुर्लभ पृथ्वी धातुहरूको दुर्लभ एक हो। यो चांदी-ग्रे धातुहरू अन्य ल्यानथानाइडहरूसँग धेरै आम गुणहरू साझेदारी गर्छन् तर केही विशिष्ट विशेषताहरू पनि देखाउँछन्। यहाँ केहि रोचक थुलियम मा एक नजर छ तथ्यहरू:
यद्यपि दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू सबै दुर्लभ होइनन्, ती नामहरू छन् किनभने तिनीहरू आफ्नो अयस्कबाट निकाल्न गाह्रो हुन्छन् र सफा गर्छन्। वास्तवमा थुलियम दुर्लभ पृथ्वीको कम्तिमा प्रचुर मात्रामा हो।
थुलियम धातु पर्याप्त छ कि यो एक चाकू संग काट्न सकिन्छ। अन्य दुर्लभ पृथ्वीहरू जस्तै, यो निषेध र नुहाली हो ।
थुलियमसँग चाँदीको उपस्थिति छ। यो हावामा उचित स्थिर छ। यसले छिटो रूपमा पानीमा प्रतिक्रिया गर्दछ र छिट्टै एसिडहरूमा।
स्वीडिश रसायनिक प्रति टाउको क्लवले 1979मा खनिज एबेरियाको विश्लेषणबाट धेरै दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको स्रोतबाट थुलियम पत्ता लगायो।
स्कुल्याण्डको नाम स्क्यान्याण्डविया-थ्युलको लागि थिइयो।
थुलियम को मुख्य स्रोत खनिज मोनजाइट हो, जुन प्रति मिलियन प्रति 20 भागहरु मा थोलियम हुन्छ।
थुलियम विषाक्त छैन, यद्यपि यो जैविक प्रकार्यलाई थाहा छैन।
प्राकृतिक थुलियम एक स्थिर आइसोटोप, टीएम -16 हो। थ्युलियमको 32 रेडियोकर्मी आइसोटोनहरू उत्पादन गरिएका छन्, जुन 146 देखि 177 सम्मको परमाणु जनको साथ।
थुलियमको सबैभन्दा सामान्य ओक्साइडेशन अवस्था टीएम 3+ हो । यो आक्रामक आयन सबै भन्दा सामान्यतया हरियो यौगिक रूपहरू। जब उत्साहित हुन्छ, टीएम3+ एक बलियो ब्लू प्रतिदीप्ति उत्सर्जन गर्दछ। एक रोचक तथ्य यो हो कि यो प्रतिदीप्ति, europium Eu 3+ बाट लाल र Terbium Tb 3+ बाट हरियो, यूरो बैंकनोटहरूमा सुरक्षा मार्करको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। फ्लोरोसेन्स प्रतीत हुन्छ जब नोटहरू कालो वा पराबैजनी रोशनी भित्र रहेका हुन्छन्।
यसको दुर्लभता र खर्चको कारण, थुलियम र यसको यौगिहरूको लागि धेरै प्रयोगहरू छैनन्। तथापि, यो पोर्टेबल एक्स-रे उपकरणको लागि YAG (यट्रियम एल्युमीनियम गारेनेट) लेजरहरू, सिरेमिक चुम्बकीय सामग्रीमा र विकिरण स्रोत (एक रिएक्टरमा बमोजिम पछि) को रूपमा प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ।
थुलियम रासायनिक र शारीरिक गुण
तत्व नाम: थुलियम
परमाणु संख्या: 69
परमाणु वजन: 168.93421
डिस्कवरी: प्रति थिडोर क्लव 1897 (स्विडेन)
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन: [Xe] 4f 13 6s 2
तत्व वर्गीकरण: दुर्लभ पृथ्वी (लेथानाइड)
शब्द उत्पत्ति: थ्युल, स्क्यान्याण्डवियाको पुरातन नाम।
घनत्व (जी / सीसी): 9.321
पट्टे प्वाइंट (के): 1818
उभरने प्वाइंट (के): 2220
रूप: मुलायम, लचीलापन, डुबाइल, सिलीय धातु
परमाणु रेडियो (pm): 177
परमाणु मात्रा (सीसी / mol): 18.1
कोभेलेंट राइडस (अपराह्न): 156
ईनिक रेडियो: 87 (+ 3e)
विशिष्ट ताप (@ 20 डिग्री CJ / g मोल): 0.160
वाष्पकरण ताप (केजे / mol): 232
पॉलिंग नगरीता संख्या: 1.25
पहिलो आयोनिजिंग एनर्जी (केजे / मोल):59 8
ओक्सीकरण राज्य: 3, 2
ल्याटिस संरचना: हेक्सगानल
ल्याटिस Constant (Å): 3.540
ल्याटिस सी / ए रेटियो: 1.570
सन्दर्भहरू: लस एलामोस नेशनल प्रयोगशाला (2001), क्रिसमस रासायनिक कम्पनी (2001), लेंजको ह्यान्डबुकको रसायन (1952), रसायन विज्ञान र भौतिक विज्ञानको सीआरसी पुस्तिका (18 औं संस्करण)
स्वाभाविक तवरमा कति तत्वहरू भेट्टाउन सकिन्छ?
नाइट्रोजन क्यान्सर तालिकामा कहाँ छ?
Praseodymium तथ्य - तत्व 59
Motorsports प्रशंसकहरु को लागि शीर्ष NASCAR पत्रिका
मिसौरी पश्चिमी राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश
बखतबन्दी डिनोसोर चित्रहरु र प्रोफाइलहरू
हरिजनको अर्थ अर्थ र उत्पत्ति
अत्यावश्यक शब्दहरू र कसरी तिनीहरू प्रयोगमा छन्
झेंग उहाँका खजाना जहाजहरू
हिन्दू वेडिंग रिक्तिहरु
कसरी सुरक्षित Rappel लंगर निर्माण गर्ने
कसरी कन्जुगेट "एभेरिटर" (बचाउनका लागि)
साइन्स फेयर प्रोजेक्ट्स को लागि पुनर्चक्रण पेपर
ग्रिड र प्रदर्शन सुधार गर्न सक्ने बानीहरू अध्ययन गर्नुहोस्
इटालियन Verb Conjugations: 'मोरियर' (मरो गर्न)
गल्फ क्लबमा 'क्याम्बेर' वर्णन गर्दै
कुन उमेरमा मेरो बच्चाले ब्यालेट कक्षाहरू सुरु गर्नुपर्दछ?
साधारण रसायनको पीएच सिक्नुहोस्
Raggedy Ann र Raggedy एन्डी एकत्रित
भारतीय कास्ट र सामूहिक जापानी कक्षाहरू